Guitar Pro6Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Guitar Pro6Patch လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိနေလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ကျွန်တော် အရင်လည်းတင်ပေးပြီးသားပါ လင့်ပျက်သွားလို့ ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...! သုံးလို့အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူသွားနိုင်ပါတယ်...!
1- Launch "Guitar Pro 6.exe" and install. Do not run.
2- Copy the "Patch.exe" file to the directory in which Guitar Pro was installed
3- Run the Patch (once it's on the folder where Guitar Pro is installed), and
4- When patching finishes, run Guitar Pro6and an Activation window will pop-up
5- Copy and paste:
( 27.49 MB )
1 Response to Guitar Pro6Patch...!